स्थानीय तहमा कुन प्रदेशका कुन दलका कति निर्वाचित ? हेर्नुहोस् « Canada Nepal
स्थानीय तहमा कुन प्रदेशका कुन दलका कति निर्वाचित ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्म ७१६ तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा आज साँझ ८ बजेसम्म प्रविष्ट भएका आधारमा विश्लेषण गर्दा मुलुकका सातमध्ये प्रदेश नं १ बाहेक सातै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका धेरै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने प्रदेश १ मा नेकपा (एमाले)को अगुवाइ देखिएको छ ।
कांग्रेसले प्रमुखमा २१, अध्यक्षमा ४४, उपप्रमुखमा ११, उपाध्यक्षमा ३५, वडाध्यक्षमा ५५४, महिला सदस्यमा ४३१, दलित महिला सदस्यमा ४२५ र सदस्यमा ८६६ गरी कूल दुई हजार २८७ पदमा जीत हासिल गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अध्यक्षमा १२, उपप्रमुखमा चार, उपाध्यक्षमा १५, वडाध्यक्षमा १२३, महिला सदस्यमा ५८, दलित महिला सदस्यमा १०५ र वडा सदस्यमा १७८ गरी कूल ५३५ स्थानमा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति : जेठ ८, २०७९ आइतबार १० : ०५ बजे
मालिकाले ल्यायो ५५ करोड ९५ लाखको बजेट